Glass ibhotolo ahlale imbiza
iglasi candy imbiza
iglasi imidlalo ukudla
iglasi honey imbiza
glass Mason imidlalo
iglasi cream imbiza
iglasi pudding imbiza
Nokupheka Oil Glass Bottle
namafutha omnquma Glass Bottle
iglasi Reagent Bottle
Glass Cup okanye imagi
iglasi yewayini Ibhotile California
kunye nebhotile yotywala
iglasi imvaba yewayini elibomvu
intloko iglasi skull ibhotile skull
ibhotile yeglasi vodka
ibhotile yeglasi uyiZisa
bottle oyile Essential
Glass ibhotile izithambiso
into yokuthambisa Ibhotile Glass
Ulwelo isepha Bottle
iglasi nesiqhumiso Bottle
njani ukufumana iisampulu?
Ewe, singakwazi ukunikela isampuli simahla ukuba ukujonga umgangatho. Nakuba kunjalo kufuneka ukuba uhlawule eJozi.
Ngaba ntoni kushicilelwa iintsuba?
Ngokuqinisekileyo. uya ezahlukeneyo iindlela zoshicilelo thembisa, ezifana yoshicilelo screen isilika, sokunyathela eshushu kunye noshicilelo yesilivere. Kwaye kwakhona ukunika frosting, umbala ukutshiza, uphawu, ipolishi, nesingxobo inkampani sticker njl
ixesha lwemveliso yakho elide kangakanani?
Ngokuqhelekileyo oku kufuneka malunga 15-20days.
Ithini intlawulo yakho?
T / T, 30% T / intlawulo T kwangaphambili,-70% eseleyo ihlawulwe nxamnye ikopi BL. L / C kwi emehlweni naye wavuma.
Ngaba wenza umngundo entsha ngokobukhulu esingabizi endiyifunayo?
EWE, Sinako ukwenza uyihlanganise wena
Yintoni na ixesha phambili eliqhelekileyo?
Kuba iimveliso stock, siya kuthumela impahla kuwe kwiintsuku zomsebenzi 7-15 emva sifumana payment.For zakho nezinye iimveliso, iintsuku 35-45 emva kokufumana-30% T / T idibhozithi okanye L / C kwi emehlweni
Ukuba nayiphi na iibhotile zonakeleyo ezaphukileyo, ngaba mvuma njani kuthi?
Siza indawo iintsuba zonakeleyo eyaphukileyo ukuze yakho elandelayo okanye njengoko kuyimfuneko umhla.
wenza njani ulawulo lwakho quality?
Thina ezabo iqela lethu 3 inxalenye QC ukuba ahlole ukuze ngamnye ukuba kuyimfuneko.
njani ukukhetha lokuthumela indlela?
Ngokuba umyalelo encinane, siza sicebisa ukuba ukhethe express, ezifana ne-DHL, kaFedEx, UPS, TNT, etc.For umyalelo enkulu, siza sicebisa ukuba ukhethe yi sea.If wena ezingxamisekileyo, ungakhetha-moya. siza kukunceda ukuba ukhethe eyona eficient yokuthumela ndlela ngokweemfuno zakho iinkcukacha.